Magaaladda Stockholm: Xaafadda Rinkeby Oo Xalay Lugu Dilay Wiil Soomaali ah -
HomeWararkaMagaaladda Stockholm: Xaafadda Rinkeby Oo Xalay Lugu Dilay Wiil Soomaali ah
Magaaladda Stockholm: Xaafadda Rinkeby Oo Xalay Lugu Dilay Wiil Soomaali ah
Xaafadda Rinkeby ee ku taala waqooyi beri ee magaaladda Stockholm caasimadda dalkaan Iswiidhan, ayaa xalay fiidkii waxaa goob lagu cuno pizza-da lugu dilay wiil soomaali ah. Wiilkan oo da’diisa lugu qiyaasayo 25 ilaa 30 jir, ayaa la sheegay inuu ku sugnaa goobtaas goobta pizza-da laga cuno markii rasaas ooda loofa qaaday. Wiilkan ayaa markii dambe ugu geeriyooday cisbitaalka dhaawicii soo gaaray.
“Waxaan marka hore sugeeynaa ammaanka goobta dilka ka dhacay, waxaana markaa eeggeeyna kaamirooyinka innagoona baaritaanka sii wadeeyna” ayey tiri Eva Nilsson ka tirsan booliska Stockholm. Dad goob joog ah ayaa muuq baahiyaha SVT u sheegay in wiilkan soomaaliga ahi uu ku sugnaa gudaha maqaayada isagoo dalbaday pizza, ka hor intii aan wax yar ka dib uun soo galeen raggii xabadaha ooda uga qaaday.
Booliska oo goobta ku sugnaa ayaa afar qof oo goob joog ahi waxaa ay ka kaxeeysteen meesha si loo soo dhageeysto.
Ugu dameyntiina Xalay fiidkii saacadu markeey aheyd sagaalkii iyo shan iyo tobban daqiiqo, ayaa boolisku shaaciyeen in uu geeriyooday wiilka soomaaliga ah, kaas oo u dhintay dhaawicii ka soo gaaray xabadaha ooda loogaga qaaday. Mana jirto cid loo soo qabtay falkan dilka ah. Falalka noocan ah ayaa noqoday kuwo soo laa laabatay, kuwaas oo qaarkood la aaminsan yahay ineey u dhaxeeyaan dhalinyarro soomaali ah.